रवीन्द्र मिश्रका छोराले अमेरिकामा चुनाव जिते ! « Light Nepal
रवीन्द्र मिश्रका छोराले अमेरिकामा चुनाव जिते !
Published On : 15 April, 2019 2:32 pm
काठमाडौं, २ वैशाख । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रका छोरा युराल मिश्रले अमेरिकाको बाउडेन विश्वविद्यालयको ‘स्टुडेन्ट गभरमेन्ट काउन्सिल’को चुनाव जितेका छन् ।
अगाडि उनले भनेका छन्, ‘मैले चुनाव हारेँको थिएँ । मेरो छोराले जितेछ । मेरा छोराजस्ता दशौँ हजार क्षमतावान नेपाली विद्यार्थी विदेशमा छन् । यो देश हाम्रो पुस्ताले बनाउन सकेन भने तीमध्ये अधिकांश नेपाल फर्किँदैनन् । दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमा बस्ने वातावरण नै नबनाई देश कसरी बनाउने रु मेरो छोराका उमेरका दशौँ लाखौँ युवाहरूलाई नेपाल फर्किने र नेपालमैं बस्ने वातावरण सृजना गर्न लागि परेको छु । नयाँ वर्षले सोही दृढतामा थप शक्ति प्रदान गरोस् ’
छोरालाई धेरैधेरै बधाई र शुभकामना !